Wayevela Phi UMtyholi? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
UThixo akazange adale uMtyholi. Kunoko, uThixo wadala ingelosi yaza yona yazijika yazenza uMtyholi, okwabizwa ngokuba nguSathana. UYesu wakha wathetha amazwi abonisa ukuba uMtyholi wakha wangumntu onenyani nongenasono. Ngoko ke, ekuqaleni uMtyholi wayeyingelosi elungileyo kaThixo.—Funda uYohane 8:44.
Kwenzeka njani ukuba ingelosi ibe nguMtyholi?
Ingelosi eyaba nguMtyholi yakhetha ukuvukela uThixo yaza yafaka uAdam noEva umoya wezikhova ukuze balandele yona. Ngoko ke, yiyo eyazenza uSathana, igama elithetha “Umchasi”.—Funda iGenesis 3:1-5; ISityhilelo 12:9.
Njengabantu nezinye iingelosi, le ngelosi eyaba nguMtyholi yayinenkululeko yokwenza okulungileyo okanye okubi, kodwa yona yafuna ukunqulwa. Eyona nto yayithe phithi yiyo kukunqulwa kunokuvuyisa uThixo.—Funda uMateyu 4:8, 9; Yakobi 1:13, 14.
UMtyholi ube naliphi igalelo kubomi babantu? Ngaba umele umoyike? IBhayibhile iyayiphendula le mibuzo.